Isivumelwano phakathi kweTrovaWeb neSicindustria senziwe sasebenza
Sikushiye ngokuqokwa okuthokozisayo kwe- umongameli della Isigaba sedijithali di ISicindustria. Ngokuqondile kulo mcimbi, i-CEO yethu, UCaterina Doddis, wayekhethiwe Iphini likahulumeni kwesigaba esifanayo.
Sikutshele ukuthi injabulo, umdlandla nokwaneliseka konke lokhu kuvuse ilunga ngalinye leThimba. Kunalokho bekusicindezele nakakhulu sebenza kanzima nangokuzimisela nsuku zonke ukuhlwanyela kakhulu futhi uvune imiphumela engaphezulu. Namuhla singakutshela ngenye yalezi zinhloso.
Isivumelwano esisayinwe phakathi kweTrovaWeb neSicindustria esenza izinsizakalo zokubonakala kwezinkampani zifinyeleleke kalula
La isivumelwano phakathi kweSicindustria neTrovaWeb yasayinwa ngesikhathi kuqokwa umongameli.
Kuyinto lena umhlangano phakathi kwalezi zikhungo zombili kuthembisa ukuthela kakhulu hhayi amaqiniso amabili kuphela, kodwa ngaphezu kwakho konke izinkampani futhi i Izinkampani zaseSicilian ngubani ozosizakala ngakho. Umhlangano unikeza empeleni ISicindustria ithuba lokuthengisa kabusha Izinsizakalo zokubonakala kweTrovaWeb ngamanani aphansi kakhulu.
Izinsizakalo zethu zokubonakala kwi-inthanethi ezimeni ezihle kakhulu sibonga iSicindustria
Ukunikezwa kwenziwe kwaba nokwenzeka yi- Ukubambisana con ISicindustria iphathelene ne- Umbukiso wegolide we-Multimedia: umbukiso ophelele futhi ocebile phakathi kwemikhiqizo yewebhu yokuqalisa kwethu. Lapho Isixazululo segolide yakhelwe njenge-mini-site yangempela, eyodwa iwebhusayithi yakhelwe ukuheha ilukuluku labagibeli futhi, ngaphezu kwakho konke, intshisekelo ye- Injini yokusesha. La Igolide Umbukiso Wegolide kuklanywe ngokucophelela ukuze kuboniswe okwakho ngendlela ekhangayo umsebenzi wobungcweti kanye nezinsizakalo ozihlinzekayo. Le nsizakalo inikezelwe ku- amabhizinisi amancane naphakathi, imisebenzi yezentengiso neyasendaweni yazo zonke izinhlobo. Into ngayinye ye-Showcase yathuthukiswa ukuthuthukisa amandla ebhizinisi lakho. Kepha ngaphezulu kwakho konke kulungiselelwe kusuka kuwo wonke amaphuzu ukuze ubeke eyakho iwebhusayithi su -Googleit Injini Yokucinga kuchofozwe kakhulu ngama-surfers ewebhu.
Ukubonakala kwezindleko eziphansi: ngeSicindustria neTrovaWeb uzokwenza ibhizinisi lakho liphume ngamanani angakaze abonwe ngaphambili
La ukubonakala kuwebhu imvamisa inezindleko: phakathi kwezinhlangano zokuxhumana ezinezibalo ezeqile, uxhaso, izikhangiso nezikhangiso ezikhokhelwayo, lo amabhizinisi amancane naphakathi nendawo uvame ukuzithola ephoqeleka ukuthi ayeke ukuba nokubonakala. Ngokulahlekelwa okukhulu ebhizinisini lakhe. Lapha-ke uthatha insimu I-TrovaWeb ukuphefumula, ukubonakala nethuba lokwakha ibhizinisi eliqinile ngamanani aphansi kakhulu. Izindleko, ekuqaleni ezacatshangelwa ukuthi ziyizindleko eziphansi, manje seziba ngaphansi kakhulu kuzo Izinkampani zaseSicilian ngubani ozojoyina umhlangano. L 'sipho yenziwe yaba khona nge ISicindustria empeleni, kubiza kuphela 400I-VAT ifakiweesikhundleni salokho ka-549,00€ uhlu lwamanani. Thola umhlangano kulesi sixhumanisi: https://www.sicindustria.eu/trovaweb.html
Tags: Izindaba sicindustria thola